Dunia Wai =========================ဝေကမ္ဘာ: အပျို...အပျိုစစ်....အပျိုစင်...ဆိုတာဘာလဲသိချင်ရင်ကြည့်ပါ
Dunia Wai =========================ဝေကမ္ဘာ
International nice places
*** အပျို..အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင်.......***
((ကိုယ့်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်တဲ့သူဟာ ဥယာဉ်မှူးလို့ပန်းတစ်ပွင့်ကိုအရိပ်တစ်ကြည
့်ကြည့် ကြည့်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးမှာပါ....။ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး ဆိုတာမျိုးနှင့် ကိုယ့်ဘဝကို ချိုးယူမည့်သူ မဟုတ်ပါဘူး))
Posted by မင်းသားကြီး facebookမှသူငယ်ချင်းတစ်ဦး၏ပို့ စ်လေးကိုကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Dunia Wai at 00:23
ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများဆီသို့ လည်းအလည်သွားရောက်ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါသည်
ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an Kyaw Htet Win
ွှအင်္ဂလိပ်စာလေ့ လာလိုသူများအတွက်အခမဲ့ သင်ကြားရေးဝက်ဆိုဒ်
Eleven Media Group သတင်းစုံဝက်ဆိုဒ်
မြန်မာ Mp3 တေးသီချင်းများနားဆင်ချင်ရင်...ဒီမှာအကုန်နီးပါးရှိတယ်
မြန်မာ flash သီချင်းများနားဆင်ချင်ရင်ဒီမှာရှိတယ်
7 Days သတင်းဂျာနယ်
Malwarebyte Anti-Malware PRO 2013
photo shop ၀က်ဆိုဒ်များ
မြန်မာ mp4 သီချင်းများ
Five Star A Nyeint - 1
*** အပျို..အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင်.......*** ((ကိုယ့်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်တဲ့သူဟာ ဥယာဉ်မှူးလို့ပန်းတစ်ပွင့်ကိုအရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့် ကြည့်ပြ...
Your Slideshow Title: Wai’s trip from Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to3cities Kuala Lumpur, Melaka and Penango was created by TripAdvisor. See another Italy slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.
Waiphyoaung Slideshow: Waiphyo’s trip from Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Melaka was created by TripAdvisor. See another Melaka slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.
ဝေဖြိုးအောင်. Theme images by Juxtagirl. Powered by Blogger.